Translate Myanmar (Burmese) to Chinese (Simplified) | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Chinese (Simplified), Myanmar (Burmese) to Chinese (Simplified) translations, Myanmar (Burmese) to Chinese (Simplified) Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား 你好！你好吗
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် 你好我的名字是
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို 我很抱歉，但我已经结婚了
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ 请问现在的时间是什么？
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? 可以借用手机充电器吗？
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? 请给我一杯饮料吗？
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး 我对面筋过敏
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ 请打电话给你的老板